Mana Oromoo Swiss: December 2006
Dhaamsa Waggaa Haaraa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo
Guyyaa: 31/12, 2006
Dhaamsa Waggaa Haaraa Hayyu Duree Adda Bilisummaa OromooUmmata Oromoo, fi miseensota ABO, akkasumas qabsaawota bilisummaa Oromoo,Maqaa koree Hojii Geggeesituu ABOti, fi maqaa kiyyaan, baga bara haaraa 2007 geessan jedha. Barri moofaan dabree haaraan yeroo seenu, caalaa wayyaan akka waliin dhufu hawwuunii fi akka dhufus carraquun ilmoo namaa irraa kan eegamu. Waan ta’eefis barri dhufu kan dagaagina qabsoo itti arginu,kan aagaa, nagaa fi injifannoo akka isiniif ta’u hawwii koo ibsa.
Sochiin bilisummaa Oromoo gufuun itti heddomatu illee bara dabres akkuma baroota taraniiqabsaawota ijoo kaayyichatti cichaniin tikfamee bara haaraa kana dhaqabeera. Gurmuun qabsawota bilisummaas guddataa qabsoon isaanis caalaa misaa of dura tarkaanfachuu danda’e. Akkanaanis, balaa kaayyoo dhaabba keenyaa ABO irratti agamame facisuudhaan, ittifufa kaayyoo ganamaa mirkaneessuu danda’ameera.
Gama dhaaba keenya ABOn rakkina keessatti dhalatee tureen dhaabichi bakka lamatti qoodamuun beekama dha. Rakkina kanas karaa nagaa furmaata itti gochuuf murna kaayyoo ganama irraa ceheef carraa of qoree of sirreessuu kennuuf jecha koreen Qaama Cehumsaa jedhama ture dhaabbatee akka hojii dhaabichaa geggessaa ture ni yaadatama. Korichi yeroof kan utubame waan tureef dirqama yeroo isaa erga fixate booda jaatamee jira.
Korri ABO kan Amajjii bara 2006 taa’e koreen Qaama Cehumsaa kun akka gadaa hojii isaa raawate murteesse ABOn hoggana dhaabbataa filatee maqaa isaatiin akka socho’ii ittifufu tasiseera. Gaaffii Oromoo waan ilaalunis, motummaa gabroofataa irratti qabsoon tolfamu toora hallen akka ittifufu ajajee jira. Dabalees, hariiroo dhaabota gara garaa waliin godhamu irrattis masaka kennuun xumurameera. Tarkaanfin kun injifatnoo bara dabrsine keessaa tokko ture. Murtii kora kanaan masakamuunis caasaan dhaabichaa sirna haaryaa haala waliin deemu dirirfachuun sochiin mirqansaan mul’achu dandaera. Hunda caalaa kaayyoo ganamaa lakkisuun, bilisummaa Oromoo mirkanessuu dhiifnaan mirga hanga ammaa sabni Oromoo qabsoon argatehuu of duuba deebisuuf akka ta’e ummatni keenya kan biyya keessaa fi alaas akka hubatu tattaaffiin godhames firi qabeessa ture.Karaa kaaniin harirron humnoota Oromoo bilisummaa Oromoof dhaabbatan gidduutti mul’ates akkan jajjabeessa ture. Humnootni bilisummaa Oromoo, afanfaajjii dhaabni AFD ofiin jedhu, kan murni ABO keessa bahe itti miseensoome mooraa Oromoo keessatti uume qulqullessuuf ejjennaa tokko qabaatanii dura dhabbannon godhan afanfaajjii ture ittisuu irratti gumacheera. Haalli kun ittifufee, akeeka ifaa jalatti qabsoo waliin qindeeffatnii gurmuu tokkoon akka waliin socho’an bu’uura buseera.Haala sochii ummata keenya yoo fudhanes raoorroo fi midaan diinaan irratti raawwatamu haa dabalu malee waldhaansoon mootummaa gita-bulchiinsa Tigray irratti deemsisu caalatti jabaatee fi bal’atee mul’ateera. Keessumaa bartootnii fi dargagotni hidhaa fi ajjechaa diinaanf osoo hin jilbeenfatin goleelee Oromiyaa hunda keessatti sochiin godhan boonsa ture. Sochiileen ittifufaa fi mul’atan kun qabsoon Oromoo sadarkaa ummatatti jabaachaa fi humnaawaa deemuu kan mirkaneessu ture jechu dandeenya.
Akkuma qabsoon ummata keenya jabaachaa dhufuun, mootummaan Wayyanee yeroo kamuucaalaa ummatan lagatamaa fi kophxawaa dhufun yeroo calatti mul’atera. Waanta’eefis, sirnaabbaa irrummaa isaa caalatti jabeessuun hidhaa fi ajjechaan ummata keenya irraan gahu daranol kaase. Umatoota walitti busunis walgidduutti akka dhiingi dhagalau godhe. Golii keessaakanaan qabsoo ummataa ittisuuf tattaafatu irra dabrees didda keessaa ukkamsuuf imaamatabiyyoota ollaatti goolii busuu ittifufe. Akkanaanis kuno biyya walaba taate Somaliya werareeobolwan Somaliya rakkina isaani walii isaani giddutti akka hin fixanne gufuu ta’ee nannichajeeqa jira.
Cuunfatti barri dabrsine qabsawota Oromoo fi ummata Oromoofis yeroo falamaa jabaa fimilkiilee nama jajjabeessu ture jechuu dandeenya. Kun akka jirutti ta’ee dhugan irra taramu hin qabne tokko haala kana gahatti dhimma itti baanee yeroo injifatnoo dhiheessuuf sochiin gama jaarmayaatiin mata mataatti ta’e gamtaan humnootni bilisummaa Oromoo godhaan gahaa ta’e hin argamne. Humna dandeetti qabsoon Oromoo qabu walitti qindeessanii qabsawanii qabsosisuu irratti hir’ina ni ture. Kanuma waliin dadaqinsi kaayyoo irratti murna garii biratti mul’ates afanfaajii umuun qabsoon bilisummaa Oromoo dadhabatti akka hergamu gochuu irratti gumachun ni jira.
Hi’inoota kanneen injifatnee bara haaraa dhufu kana mirga caalu gonfachuudhaaf qabsawotniOromoo dirqamni nu eggatu guddaa dha. Dhaaba keenya ABO, har’a illee kaayyoo kaleessaqabatee ka’eef amanamaa ta’ee qabsicha kan ittfufu ta’uu caalaatti hojiin of mirkaneessuu,ummatni keenya caalatti jaarmyaan hammatamee qabsoo ittifufaa ta’e akka godhu hojjetuunfardii.
Humnootni bilisummaa Oromiyaaf dhaabbatanis dirqamni isaan eggatu guddaa dha. Akkajaarmayaa fi gamtaanis dadhabbii qaban gamagamanii, haala itti gurmuun qabsawotabilisummaa jabaate hojiin itti of mul’suu fi ummata keenya sochosuu danda’u itti mirkan’uargamsiisuuf socho’u irra eegama.
Ummatni keenya alaa fi keessas olola ofuun sobamuun mirga haaraa dhiifnaan isuma qabsoo fiwareegama hanga ammaan argamehuu kan of duuba deebisuu fi hamilee dhaloota dhufuu kan hubu ta’uu hubatee qabsoo bilisummaaf godhu jabinaan baranas ittifufuun qaba.
Mayyii irratti, haalli keessa jirru xaxaa ta’uu ni hubatna. Haalli xaxaa fi rakkisaa dha jenneehaalaaf jilbeenfatu osoo hin taanee haala jiru jabinaa fi qabsoon jijjiruuf qabsawu feesisa.Qabsoon keenyas dheeraa fi ba’a bu’ii akka qabu beeknee karaa salphaa fi qaxamura hinargamne eegu irra gurmuu keenya jabeesinee muratnotan warraquu dha. Cimina jaarmaya,qabsoo qindawaa fi ittifufaa, of irratti fi ummata Oromoo irratti abdi qabachuu bu’uura taasifate magarsuun bara 2007 kan milkii fi injifatnoo taasisuuf haa kaanu.
posted by Mana Oromoo Swiss @ 4:28 PM 1 comments
Waggaa Haaraan 2007 Oromootaa Maraaf kan Tokkummaa Kaayyoo, Kan Injifannoo fi kan Bilisummaa akka ta'u manni Oromoo Swiss Hawwa.
posted by Mana Oromoo Swiss @ 2:39 PM 1 comments
Badii Shanee gumii dalagaa jirtu, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo bar 2004 ibsaniijiru.
Yeroo ammaa kana qabsoon ilmaan Oromoo balaa hamaa irra akka jiru, sabni Oromoo hundi akka beekuf, hatattamaan ejjennoo jabaa fudhachuun dirqama belbeltuu yeroon nu gaafatudha. Kanaafuu, bakka jirrutti,waan dandeenyu hundaan kana wal hubachiisuunii fi irratti hojjechuuf Oromoon Oromummaan keenya nutti dhagahamu hundi waadaa galuun daran murteessaa dha.
Keessattu ilmaan Oromoo biyya hambaa jirru, meeshaa teknoology jabanaatti fayyadamuun waan ta’aa jiru, yeroodhaa yerootti faana bu’udhaan hubachuuf carraan nuti qabnnu waan baldhaa ta’eef; waan yeroo yerootti deeman xiinxaluun; uummata keenya biyya keessatti ukkaamfamee jiruuf, karaa mija’u hundaan waan jiru hubachiisuun; sabni keenya akka farreen qabsoo bilisummaa Oromootiin hindogoggorre gochuun, dirqama Oromumman nu gaafatu ta’uu hubachuu qabna.
Diinni hamtuun, diina fira fakkaattee nama hubuuf dhamaatu, ta’uu ishee hamma ta’e hundumtuu nihubata jedheen yaada. Kaleessa maqaa Oromootiin Oromoo keessa of dhoksanii dhaabota Oromoo bilisummaa Oromiyaatiif qabsaawan diigaa warri turan; har’a dirqama diinni itti kenne waan xumuran itti fakaatee; ifatti bahuudhaan diinatti siquun; qaama isaanii itti gatanii, uummata Oromoo diina jala tursuuf yeroo carraaqan argamu.
Jarreen kun harri’a fuulduratti dhihaatanii akka waan Oromoon harka kenneetti fakkeessanii seenaa Oromoo xureessuuf yaaluun isaanii, uummata oromoo tuffachuu isaaniit; kaayyoo uummata Oromoo ulfina dhorkuu isaaniiti. Waldhaansoon ilmaan Oromoo sabboontonni gochaa jiran kun kan yoo danda’amee diina of irraa buqisuu dhaan abbaa biyyuummaa keenya dhugoomfachuu; yoo dadhabame dhaloota dhufutti qabsicha dabarsuu yoo ta’a; murni yeroo ammaa diinatti hidhatan kun kana dabamsiisuun qabsichi akkuma as irratti dhumatuu fi qabsichi dhaloota itti aanutti akka hinceeneef shira qabsicha dhibamsiisuu dalaguu dha. Waan amma gochaa jiraniin of saaxiluun isaanii gaarii ta’u illee; garuu ilmaan Oromoo qulqulluun maqaa Adda Bilisummaa Oromootiif kabajaa fi jaalala guddaa qaban hedduun, hanga ta’e murna bitamtoota diinaa kanaan afaan faaja’aa jiraachuun isaanii waan hin oolle. Kanaaf irra dibaadhaan ykn “yeroon haa calalu” jechuu-dhaan usuu fi maal na dhibdeedhaan, fuula galagalshachuu osoo hin-taane; nuffaa fi sodaa tokko malee, wal dammaqsuu fi shira diinaa kana saaxiluun, wal barsiisuun, akeeka gantoota kana fashalsiisuun, gaaffii belbeltuu fi barbaachisaa yeroot. Kanaaf deebisnee, deddeebisnee saba keenya karaa qajeelaa agarsiisuu fi barsiisuun murteessaa dha. Yoo kana goonee dogoggoraa fi badii deddeebi’anii muldhatan hambisuu irra caalaa, kaayyoo keenya galmaan ga’uuf hanga ta’e qooda murteessaa ta’a.
Kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ganuudhaan diinatti kan maxane murni Shanee Gumii kaleessa utuu inni Amaaratti hingalin, hayyoonni keenya shira xaxamaa jiru, waan ta’uuf deemu, dursanii saba Oromoo hubachiisaa akka turan fi waldhaansoo guddaa gochaa akka turan ragaan hamma ta’e dhiheessuun ni danda’ama. Garuu yeroo sanatti sabni keenya dammaqinsa ga’aa ta’e dhabuun; murtee barbaachisaa yerootti fudhachuu hin dandeenye. Kun kan nu-agarsiisu ammallee uummanni keenya deemsaa fi ejjennoo dhaabonni godhan, haala jiru waliin yeroon hubachuu dhabuu dha.
Egaa utuu ilmaan Oromootaa biyya hambaa jirru carraa qabnutti fayyadamuun adeemsaa dhaabota keenyaa yeroo yerootti itti dhimmuun kan hordofnu ta’ee, warra fira fakkaatanii akeeka diinaaf dalagan; bara dheeraaf diina jala nu tursuuf deeman kana, yeroon ofirraa dhorkinee jiraatee; har’a maqaa “tumsaatiin” uummata Oromootti hin qoosamu ture. Kan diinni akka eebootti sodaattu maqaa Adda Bilisummaa Oromoo, mooraa diinaa keessatti waamuun, diina hamlee cimsuuf tattaafachuun, walirratti nyaaphaa uumuun waan eegamu hinturre. Haata’uyyuu malee har’a akka gantoonni Shanee gumii hawwan utuu hin taane; hayyoonnii hoggantoota Adda bilisummaa Oromoo qabsoo guddaa godhaniin, dhaaba keenya Adda Bilisummaa Oromoo akka harka diinaatti hin kufne gochuun gantoota bar soddoma ol ofdhoksanii, Oromoo fakkaatanii, Ethiopiyummaaf carraaqaa turan ciminaan dura dhaabbachuun saaxiluudhaan, shira diinaa fashalsiisaanii jiru.
Hayyoonni keenya hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo badii fi deemsa farraa Shanee gumii xiinxaluuf yeroo itti hin fudhanne. Garuu hamma har’a qabatamaan Shanee gumii Amaaratti maxxantetti namni hedduun hin amanne ture.
Waan nutti labsamaa ture keessaa akka ragaa tokkootti kan ilaalamuu danda’u, waggaa sadii fuuldura hogganaan Qaama Ce’umsa Adda Bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Dhugaasaa Bakakkoo eegala waggaa haaraa bar 2004 irratti dhaamsa uummata Ormoof dabarsan, Raadiyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti labsame xumura barreeffama kana irratti akka dhaggeeffattan kabajaanan gaafatamtu.
Eeyyee yeroo sanatti Oromoota hedduudhaaf dhugaa hin fakkaatu ture. Hiriyootaa fi maatii heddutu irratti wal falmaa ture. Hunduu ifa baasee diinummaa fi gantummaa Shanee kana dubbachuuf ni leeyya’a ture. Egaa yeroo hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo haqa jiru irratti hunda’anii dhaamsaa fi waamicha nuuf godhan, yeroodhaan maaltu akka ta’aa jiru sirriitti utuu hubanneerra ta’ee; farreen qabsoo keenyaa of keessaa yeroon baasnee, qabsoon keeny hanga tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu nidandeenya ture.
“Ganna darbeef mana hin ijaaran” jedha Oromoon. Haa-ta’u malee isa itti aanuuf yeroodhaan kan itti hin qophoofne yoota’e; ammas, ganni kan biraa dhufuun isaa hinhafu. Kanaafuu, har’as yeroon maal akka deemaa jiru hubannee wal hubachiisuun, wal damaqsuun, Oromtichi harka wal qabachuun, mana keenya Shanee gumii diiguuf tattaafattu kana deebsinee suphachuuf; hatattamaan ilmaan Oromoo biyya keessaas ta'e kan alaa marri waltumsuu qaba. Haalaa fi falammii deemaa jiru kana irraa warra hubannoo ga’eessa hin qabne dammaqsuun; akkasumas shira diinaa kana saaxiluun; Wallaalaan keenya akka farreen qabsoo keenyaatiin afaan hin faajjofne dalaguun dirqama Oromummaan nutti kennu ta’uu qaba.
Har’a yoo kana irratti jabinaan hojjechuu baannee; gidiraa guddaa fi badii ulfaataatu ilmaan oromoo bara dheeraaf mudachuu danda. Kana hubachuun wal hubachiisuun dirqama oromummaa keenyaa akka ta’a hubachuun barbaachisaa dha.
Mee Raadiyoo Qabsoo bilisummaa Oromoo Irratti dhaamsaa Jaal Dhugaasaa bakakkoo xumura bara 2003 irratti sabaaf labsan ragaadhaaf haa dhaggeeffannu. Dhaggeeffachuudhaaf kana tuqaa = http://www.oromia.org/rsqbo/040101.ram)
Tokkumman ilmaan Oromoo haa jabaatu!!!
posted by Mana Oromoo Swiss @ 4:23 AM 3 comments
By Abera Oluma.
Walaloo darban waliin kan wal qabatanii fi itti fufa isaa. Kanaa halaabaan keenya? Mallattoon
Kanaa halaabaan keenya? mee namuu deebisaa;
Dhiigaan dhufe han jettan jedhaa kaa odeessaa.
Harmee irraa harma muree, abbee nafa muree,
Biyya keenya gubee daa’imman cicciree;
Kan diinni dhaabbate mallattoo gabrummaa,
Halaabaan habashaa Oromoof maalumaa?
Shanee AFD qaanoftuu xiqqumaa?
Jalatti kan boqottan jedhaa kaa nuuf himaa.
“Lakkii kunoo sobaa tooftaadhaaf hojjennee,
Maali yoo callistan kanfeene yoo goone?”
Jechuu qofa malee mee deebii maal qabdan?
Qabatamaan himaa haqaafa yoo dhaabbattan.
Shanee AFD jedhaa kaa nuuf himaa,
Suura armaan oliif deebii oromummaa.
AFD jaaruuf qabsoon bar soddomaa,
Haalbicha uffachuuf Tikisuuf Ethiopiyummaa;
Halaabaa habashaa jala boqottanii;
Suuraa babbareedeuu jalatti kaatani.
Warra gumaa waliin wal dhudhungattanii,
Maaltu isin dhibe!!! Maal keessan tuqani?
Siniin maaltu tuqa? Kan feetan yoo taatan,
Gita waan hin qabneef saba tuffiin keessan.
Hugguma “tumsa” keessan “Tooftaaf” tumattani.
Mee Halaabaa Oromoo maaloo attam gootanii?
Waa irraa nuuf himtuu? eessa akka keessanii,
Ilmaan Habashaatu sin jalaa dhoksanii?
Isintu waame mitii Tumsa kana ijaaruuf?
Walitti kan qabe diina xiqqeeffachuuf?
Maaltu isin dirqe ree Mooficha uffachuuf?
Maarree eessa gootan halaabaa Oromoo?
Jaratti gadi baasuu waa sodaattani moo?
Mee nuu himaa waa irra keenya attam gootanii?
Halaabaa Habashaa maaliif uffattanii?
Halaabaa ABO maaliin geddartaniiiii???
Meeqaan gurgurtani?Meeqa itti argattani?
“Lakkii akkas mitii dogoggoratu jiraa,
Suuraa yennaa kaasu Tekonooloogiin baraa.
Isa suuraa kaasutu irra kaawuu dide,
Halaaban ABO jira ture maddee;"
Jechuu maltu laata saba gowwoomfachuuf?
Salphina keessaniif arraba dheerachuuf.
Yookaan osoo hin beekin bu’ee keessaa badee?
Jedhaa kaa dubbadhaa Tumsa sintoo fidee.
Jadhaa kaa nuu himaa sin jalaawoo hin dhumuu,
Silaa Oromoo sobuuf hin dhabdanii sammuu.
Jedhaa kaa waa himaa sabatti ammas qoosaa,
Dhugaa lafa jiru Oromticha dhoksaa.
Kan gabaan Ordeessu gowwaan niitii dhoksa
Jedha Oromotichi yoo himu quuqqaa isaa.
Hugum “dunuunfadhaa” tooftaa keessan kanaa!
Nutti hin odeessinaa egaa isin beeknaa.
Lamuu nu gurguruuf tooftaa keessan kana,
Usaa nu irraa taa'aa adabadhaa jenna.
Kanaa ala hin jiru lamuu hingowwoomnu!!!
Sinis deemaa dhaqaa; sin faana hin dhufnu!!!
Guyyaan garuu jira kan isin gaafannu,
Guyyaan bilisoomnee hudumaa dubbannu.
Kanaaf qoosaa dhiisaa! Usaa hin jedhinaa,
Badii irraa deebi’aa; tuffiin hin fiiginaa.
Jecha oofa keessanii unuun hin jedhinaa,
“Eessa geessi” jechuun saba hintuffatinaa.
Nam meeqadha isin jedhuun hinqoosinaa;
Isintu xinnoo dha!!! diddan sin salphisna.
Sabatti gurra qabaa; jaarsa dhaggeeffadhaa,
Sirraawuu yoo feetan gorsa hayyuu fudhaa.
Dhiigoma yoo qabaattan dhiifama gaafadhaa,
Saba keenya gantan yeroon araarfadhaa.
Kaayyoo ganamaatti sammuu as deeffadhaa,
Kana isiniin jennaa saba dhaggeeffa dhaa.
Sabni kana jedha utuu lafti hin sokkin,
Gochaan keessan hamaan dhiiga utuu hin buusin.
Warri kaayyoo gantan karaa irraa maqxan,
Utuu Oromoon jiruu diinatti irkattan;
Haadha utuu qadanii harma diinaa hootan,
Dhaabadhaa of laalaa eessa akka jirtan.
Maqaa gootowwaniin lafee abbootiitiin,
Dhiiga Oromummaa safuu Oromootiin.
Eeyyee of sirreessaa yeroon as deebi’aa,
Kanaachi tutturraan isinti dhiyaa.
Booddeen dukkana dha bakka keessan dhabdu,
Habashaan isin ganti ofuu iddoo hin qabduu;
Hallayyaa seentanii ofumaa caccabduu,
Waareegama gantuu kafaltanii badduu;
Seenaa gadhee qabduu kana isinuu beektu,
Har’a hubattan malee bor kun hin argamtuu.
Dhiifama gaafadhaa Saba tuffatan,
Yeroon as deebi'aa fala yoo feetan.
Jaallewwan kaleessa qabsicha eegalan,
Hoggantoonii dhugaa kan har’a illee jiran;
Sabboontonni Oromoo bilisummaa jedhan,
Gantummaa akkasii tasa tasa hin fedhan.
Kaayyoon isin gantan biyya walaboomsu,
Dhiigatu itii cophe; lafeetu iti cabe; kanaaf sabni hinobsu!!!
“Usaa!!!” isin jettanis kanaaf namuu hin usu,
Shanee bakki jirtan soba isin hin baasu.
Hayyuu hedduu qabnaa kan waa isin gorsu,
Koottaa gurra qisaa; akka isin sirreessu.
Cubbuu keessan hunda akka isiiniif haqan,
Saba isin tuffattan isiniif araarsan;
Jaarsolii ni qabnaa yoo barachuu feetan,
Dogoggoraaf badii keessan yoo hubattn.
Yeroon as deebi’aa harma diinaa jalaa,
Bubbullaan hintoltuu lammiin sin wallaalaa.
Koottaa as deebi’aa mooraa diinaa keessaa,
Cubbuu dalagdaniif kanatu isin baasaa.
Kana egaa falli yoo kabaja feetan,
Dhiiga Oromummaa haqaan yoo qabaattn.
Kanaach egaa deemaa; nu duukaa hin laalinaa,
Isintu nu ganee nutti hin dubbatinaa.
Maaliif nu saaxiltu jettanii hin iyyinaa,
Nu dhaga’uu baannaan sichi egaa isin diinaa.
Kadhaa isinii hin qabnu! gantuu hin kadhatanii,
Kan of hin dandeenyee galtuu hin kabajanii.
Hayyuu baay’ee qabnaa; beekaan keenya hedduu,
Hoggantoota qabsoos goota diina hidduu;
Kana isinis beektu; diinni illee ni beektii,
Kanaaf isin tuffattee galchuu illee isin diddii.
Qabsoon itti fufa Tigree hinkadhannu,
Abadan abadan Amaaras hinfeenu!!!
Of irratti irkanee hanga galma geenyu,
Qabsoon itti fufti hagasuu hinteenyu!!!
Qabsoon laafte jennee diina harma hin hoonu,
Aadaa Oromtichaa abadan hin gannu.
Hagam dararamnu diinaa hin jilgeenfannu,
Gumaan baana malee, diina harma hin hoonu,
Booree booranaati diina hin kadhannu.
Qabsoon haqaan dhufti kaayyoo ganamaatiin,
Duubatti hin deebitu dhiiga Oromummaatiin;
Ethiopiummaan kuftee Oromiyaan dhufti,
Kun haqa dubiiti diinnillee ni beekti.
Gantuun achi baatus qabsoon itti fufti.
Oromoota dhugaaf aduun barii ifti.
Addi bilisummaa qabsoo itti fuufa.
Shirri diinni xaxxu burkutaayee kufa.
ABOn ni cima qabsoon itti fufa,
Oromiyaa Walabni qabsoo keenyaan dhufa!!!!!
Petition BRING THE ATTENTION OF ISSAYAS AFEWORKI TO THE CASE OF HERO
STUDENTS AND JOURNALISTS FROM OROMIA
You can help make this petition a success. Please use this link: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/360930963?ltl=1166273888You can make a difference. Share this petition with your friends and family. Thank you.
posted by Mana Oromoo Swiss @ 3:28 AM 1 comments
Walaloo darban waliin kan wal qabatanii fi itti fufa isaa. Kanaa halaabaan keenya? Mallattoon Oromoo?
posted by Mana Oromoo Swiss @ 1:29 PM 2 comments